Shiinaha Hordhaca iyo Cilad-bixinta Warshadda Vacuum Supercharger iyo alaab-qeybiyeyaasha. TieLiu
Hordhaca Iyo Dhibaataynta Vacuum Supercharger
Farqiga u dhexeeya supercharger-ka faakiyuumka iyo faakuumka faakiyuumka ee xoojiyaha faakiyuumku wuxuu u dhexeeyaa baaldegga bareegga iyo silsiladda sayidka jejebiyey, taas oo loo adeegsado in lagu kordhiyo tallaabada darawalku ku wado dhululubo sayidkiisa; halka supercharger-ka faakuumku uu ku yaalo dhuumaha u dhexeeya silsiladda masterka silsiladda iyo silsiladda addoonka, taas oo loo isticmaalo in lagu kordhiyo cadaadiska saliidda soosaarka ee silsiladda sayidka isla markaana la kordhiyo saamaynta biriijka.
Vacuum supercharger wuxuu ka kooban yahay nidaamka faakiyuumka iyo nidaamka haydarka, taas oo ah aaladda cadaadiska ee nidaamka bareegta korantada.
Vacuum supercharger waxaa badanaa loo isticmaalaa gawaarida bareegta dhexe iyo kuwa fudud. Iyada oo lagu saleynayo nidaamka biiyaha laba-qaboojiyaha ah, supercharger-ka iyo set ka mid ah nidaamka xoojinta faakiyuumka oo ka kooban qalabka baaritaanka faakiyuumka, fayadhowrka faakiyuumka iyo dhuumaha faakiyuunka ayaa lagu darayaa inay yihiin isha xoogga ee bareega, si kor loogu qaado qabashada waxqabadka iyo yareynta xoogga xakamaynta xoogga. Ma aha oo kaliya in la yareeyo xoogga shaqada darawalka, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa amniga
Markuu supercharger-ka faakuumku burburo oo uu u shaqeeyo si liidata, waxay badanaa keentaa kala-goyn la'aan, kala-goyn la'aan, kala-jebinta jejebka iwm.
Gawaarida gawaarida faakiyuumka ah ee birta korontada ayaa jaban, sababaha keenaana waa sida soo socota:
Haddii bistooladda iyo giraanta maqaarka ee silsiladda caawiyaha ah ay waxyeello soo gaaraan ama jeegga jeegga uusan si fiican u xirnayn, dareeraha bareegga ee qolka cadaadiska sarreeya ayaa si lama filaan ah dib ugu laaban doono qolka cadaadiska hoose ee ku teedsan geeska dusha sare ama kan waalka inta lagu jiro bareega. Waqtigaan, halkii laga adkayn lahaa xoog, baydalka ayaa dib u laaban doona sababo la xiriira dib u soo noqoshada dareeraha bareega cadaadiska sare leh, taas oo keenta burburka bareegga
Furitaanka waalka faakiyuumka iyo waalka hawada ee waalka xakamaynta ayaa xukuma xiddigga gaaska ee galaya qolka dambe, taas oo ah, furitaanka waalka faakiyuunka iyo waalka hawadu wuxuu si toos ah u saameeyaa saamaynta dambe. Haddii kursiga waalka aan si adag loo xirxirin, xaddiga hawada soo galaya qolka xoojinta ma ku filnaato, qolka faakuumka iyo qolka hawaduna si adag looma go'doomin, taasoo keentay hoos u dhaca saamaynta dambe ee dabaysha iyo bareeg aan waxtar lahayn.
Haddii masaafada u dhexeysa waalka faakiyuumka iyo hawo-mareenka ay aad u yar yihiin, waqtiga furitaanka waalka hawadu gadaal ayuu u dhacayaa, shahaadada furitaanka ayaa hoos u dhacaysa, saameynta cadaadiska ayaa gaabis ah oo saameynta dab-demiska ayaa yaraatay.
Haddii masaafada ay aad u weyn tahay, furitaanka waalka faakuumka kuma filna marka biriiga la sii daayo, taas oo sababi doonta in bareeggu jiido.
Biriig Servo, Kiciye Assy Brake, Gawaarida Gawaarida, Vacuum Biriigu xoojiyaa, Kordhinta Biriigu Kadib, Kordhinta Awoodda Biriigu,